မျောရငျဟိုလကျထကျက ဘောလုံးမကစားတတျတဲ့ ဘရာဇီးသားလေးတဈယောကျအကွောငျး အခုဆိုရငျ ဘယျလိုပွောမလဲ…?
ယူနိုကျတကျအသငျးမှာ မျောရငျဟိုနညျးပွခဲ့ခြိနျက ကစားကှကျနဲ့ အံမဝငျခဲ့ဘဲ ပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျမှုတှကေိုခံခဲ့ရတဲ့ ဘရာဇီးသား ဖရကျဟာ ဆိုလျရှားလကျထကျမှာတော့ ခွစှေမျးပွနျလညျတောကျပလာခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ နိုငျငံအသငျးကစားသမားဘဝ ပွနျလညျရှငျသနျလာခဲ့ပါတယျ။
( ၂၀၁၈ ) နောကျပိုငျး ဘရာဇီးလကျရှေးစငျအသငျးမှာ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ရှေးခယျြခံရတဲ့ ဖရကျဟာ နညျးပွ တဈတီရဲ့ ဘရာဇီးအသငျးမှာ အဓိက အစိတျအပိုငျးတဈရပျအနနေဲ့ ပါဝငျပတျသကျလကျြ ရှိနပေါပွီ။
ဇှနျလအစောပိုငျးက ကမ်ဘာ့ ဖလားခွစေဈပှဲစဉျ ( ၂ ) ခု ပှဲထှကျခှငျ့ရခဲ့သလို ကိုပါအမရေိက အဖှငျ့ပှဲစဉျမှာလညျး ဖရကျဟာ ပှဲထှကျကစားသမားအနနေဲ့ ပါဝငျခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။
မနကေ့ ဗငျနီဇှဲလားကို ( ၃-၀ ) အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ပှဲမှာလညျး ( ၈၆ ) မိနဈကွာ ကစားခဲ့ရပွီး သူ့အတှကျ ဇှနျလအတှငျး အကွားဆုံး ကစားခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျလညျးဖွဈပါတယျ။
ကှငျးထဲမှာ အဝါကဒျပွား မကွာခဏအပွခံရတဲ့ ဖရကျရဲ့ ကစားဟနျတှဟော ဘရာဇီးအသငျးမှာ အခုဆိုရငျ ပိုမိုပါးနပျလာခဲ့သလို မနကေ့ပှဲစဉျမှာလညျး ကှငျးလယျဒိုငျရဲ့ အဝါကတျပွား ပွသခံရနိုငျတဲ့အခွအေနတှေကေို ရှောငျလှဲနိုငျခဲ့ပွီး ပွဈဒဏျဘောတဈကွိမျသာ ကြူးလှနျခဲ့ပါတယျ။
ဗငျနီဇှဲလားနဲ့ပှဲမှာ သူဟာ ပွိုငျဘကျ ကစားသမားတှကေို ဘောလုံးနဲ့အတူ ကြျောဖွတျနိုငျမှုမှာ ( ၆ ) ကွိမျ အောငျမွငျခဲ့သလို ဘောလုံးထိခကျြ စုစုပေါငျး ( ၉၄ ) ကွိမျထိ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
သူဟာ ပှဲစဉျအတှငျးမှာ နမောအပါအဝငျ ဘရာဇီး ကစားသမားတှအေားလုံးထကျ ဘောလုံးပေးမှုအမြားဆုံး ( ၇၄ ) ကွိမျ ပွုလုပျနိုငျခဲ့သလို သူ့ရဲ့ ပေးပို့မှု အားလုံးရဲ့ ( ၉၁ ) ရာခိုငျနှုနျးဟာလညျး အောငျမွငျခဲ့ပွီး ဂိုးဖနျတီးနိုငျဖို့ အခှငျ့အ‌ရေးတဈကွိမျလညျးရရှိခဲ့ပါတယျ။
ပှဲခြိနျ (၈၆) မိနဈမှာတော့ နညျးပွ တဈတီက သူ့ကို ဖာဘငျဟိုနဲ့ လူစားလဲခဲ့ပါတယျ။
မနကေ့ပှဲမှာ မာကှငျဟို ၊ နမော ၊ ဘာဘိုဆာတို့က သှငျးဂိုးတှရေယူပေးခဲ့ပွီး ပှဲအပွီးမှာ ( ၃ – ၀ )ရလဒျနဲ့ ဘရာဇီးအသငျးက ဗငျနီဇှဲလားကို အနိုငျရခဲ့ပါတယျ။
ဘရာဇီးအသငျးသားအဖွဈ ( ၁၂ ) ကွိမျမွောကျကစားခှငျ့ရခဲ့ပွီးဖွဈတဲ့ ဖရကျဟာ သူ့ရဲ့ ခွစှေမျးပွသနမှေုကွောငျ့ လာမယျ့ သောကွာနေ့ ၊ ပီရူးနဲ့ ကစားမယျ့ အုပျစုပှဲစဉျမှာလညျး နညျးပွ တဈတီက အသငျးနဲ့အတူ ထပျမံပှဲထှကျခှငျ့ ပေးနိုငျ ဖှယျရှိနပေါတယျ။
ပှဲအပွီးမီဒီယာတှနေဲ့ အငျတာဗြူးမှာ နမောကလညျး “ဖရကျမပါဘဲနဲ့ ဒီပှဲမှာ အနိုငျရဖို့ မဖွဈနိုငျဘူး”ဆိုပွီး ပွောခဲ့ပါတယျ။
မော်ရင်ဟိုလက်ထက်က ဘောလုံးမကစားတတ်တဲ့ ဘရာဇီးသားလေးတစ်ယောက်အကြောင်း အခုဆိုရင် ဘယ်လိုပြောမလဲ…?
ယူနိုက်တက်အသင်းမှာ မော်ရင်ဟိုနည်းပြခဲ့ချိန်က ကစားကွက်နဲ့ အံမဝင်ခဲ့ဘဲ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကိုခံခဲ့ရတဲ့ ဘရာဇီးသား ဖရက်ဟာ ဆိုလ်ရှားလက်ထက်မှာတော့ ခြေစွမ်းပြန်လည်တောက်ပလာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ နိုင်ငံအသင်းကစားသမားဘဝ ပြန်လည်ရှင်သန်လာခဲ့ပါတယ်။ ( ၂၀၁၈ ) နောက်ပိုင်း ဘရာဇီးလက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ဖရက်ဟာ နည်းပြ တစ်တီရဲ့ ဘရာဇီးအသင်းမှာ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်လျက် ရှိနေပါပြီ။
ဇွန်လအစောပိုင်းက ကမ္ဘာ့ ဖလားခြေစစ်ပွဲစဉ် ( ၂ ) ခု ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့သလို ကိုပါအမေရိက အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာလည်း ဖရက်ဟာ ပွဲထွက်ကစားသမားအနေနဲ့ ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က ဗင်နီဇွဲလားကို ( ၃-၀ ) အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း ( ၈၆ ) မိနစ်ကြာ ကစားခဲ့ရပြီး သူ့အတွက် ဇွန်လအတွင်း အကြားဆုံး ကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကွင်းထဲမှာ အဝါကဒ်ပြား မကြာခဏအပြခံရတဲ့ ဖရက်ရဲ့ ကစားဟန်တွေဟာ ဘရာဇီးအသင်းမှာ အခုဆိုရင် ပိုမိုပါးနပ်လာခဲ့သလို မနေ့ကပွဲစဉ်မှာလည်း ကွင်းလယ်ဒိုင်ရဲ့ အဝါကတ်ပြား ပြသခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကို ရှောင်လွဲနိုင်ခဲ့ပြီး ပြစ်ဒဏ်ဘောတစ်ကြိမ်သာ ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဗင်နီဇွဲလားနဲ့ပွဲမှာ သူဟာ ပြိုင်ဘက် ကစားသမားတွေကို ဘောလုံးနဲ့အတူ ကျော်ဖြတ်နိုင်မှုမှာ ( ၆ ) ကြိမ် အောင်မြင်ခဲ့သလို ဘောလုံးထိချက် စုစုပေါင်း ( ၉၄ ) ကြိမ်ထိ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ပွဲစဉ်အတွင်းမှာ နေမာအပါအဝင် ဘရာဇီး ကစားသမားတွေအားလုံးထက် ဘောလုံးပေးမှုအများဆုံး ( ၇၄ ) ကြိမ် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သလို သူ့ရဲ့ ပေးပို့မှု အားလုံးရဲ့ ( ၉၁ ) ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဂိုးဖန်တီးနိုင်ဖို့ အခွင့်အ‌ရေးတစ်ကြိမ်လည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန် (၈၆) မိနစ်မှာတော့ နည်းပြ တစ်တီက သူ့ကို ဖာဘင်ဟိုနဲ့ လူစားလဲခဲ့ပါတယ်။
မနေ့ကပွဲမှာ မာကွင်ဟို ၊ နေမာ ၊ ဘာဘိုဆာတို့က သွင်းဂိုးတွေရယူပေးခဲ့ပြီး ပွဲအပြီးမှာ ( ၃ – ၀ )ရလဒ်နဲ့ ဘရာဇီးအသင်းက ဗင်နီဇွဲလားကို အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ဘရာဇီးအသင်းသားအဖြစ် ( ၁၂ ) ကြိမ်မြောက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ဖရက်ဟာ သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်းပြသနေမှုကြောင့် လာမယ့် သောကြာနေ့ ၊ ပီရူးနဲ့ ကစားမယ့် အုပ်စုပွဲစဉ်မှာလည်း နည်းပြ တစ်တီက အသင်းနဲ့အတူ ထပ်မံပွဲထွက်ခွင့် ပေးနိုင် ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
ပွဲအပြီးမီဒီယာတွေနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ နေမာကလည်း “ဖရက်မပါဘဲနဲ့ ဒီပွဲမှာ အနိုင်ရဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး”ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲရဈဆငျရဲ့ ဖွဈရပျကွောငျ့ ဘောလုံးကနျရမှာ လနျ့နတေဲ့ နယျသာလနျကစားသမား
နကေောငျးလာပွီဖွဈတဲ့ အဲရဈဆနျရဲ့ ထုတျပွနျကွငွောခကျြ